Amagumbi okuqeqesha eDelhi | Indawo yokuqeqesha eDelhi NCR - ITS
Amagumbi okuqeqesha eDelhi
Ukuqesha Amagumbi okuqeqesha eDelhi
I-innovative Technology Solutions ine amagumbi okuqeqesha eDelhi, inkulu yaseIndiya. NGAKHO ngokubanzi ukuqeqeshwa kwe-IT, indawo yokuqeshisa amakamelo, Ukuqeqesha abafundi beekholeji kunye ne-IT inkampani yokubonelela ngeenkampani. ISIHLOKO sokuqeqesha, iDelhi inikeza Amagumbi okuqeqesha eDelhi kwiinkampani zeMNC kunye neMveliso kwiimfuno zabo zoqeqesho. IYO Kwiziko lo qeqesho yenzelwe ngombono wokunika amava olwazi olucebileyo kunye neziseko zethu zobugcisa kunye neendawo zonke njengeziko loqeqesho.
Indawo yokuqeqesha eDelhi yeThengi
BABANTU abaninzi indawo zoqeqesho eDelhi okt e-Moti Bagh, eDelhi 2 Lodhi Road, eDelhi. BAMAKHONO abo bonke abaqeqeshiweyo be-10 + e-Delhi kwaye banokufumana abachaphazelekayo be-300 ngosuku olunye. ITSHEDI amagumbi okuqeqesha zixhotyiswe kakuhle ngomatshini ophezulu, iphrojekti ephakamileyo kunye nebhodi elimhlophe.
Delhi (eyaziwa nangokuthi Isizwe seNational Capital of India) yinkunzi yeIndiya. Unjalo uhlobo lokukhula kwidolophini eDelhi ukuba ukukhula kwalo kwandiswe ngaphaya kwe-NCT ukubandakanya iidolophu kumazwe angomakhelwane kwaye kwinqanaba elincinci lingabalwa inani labantu abahlala kwi-25 yezigidi njenge-2014, kwaye iyona idolophini enkulu edolophini eNdiya. indawo yomhlaba kunye nabemi. Kwakhona i4th isixeko esinabantu abaninzi emhlabeni.
I-Police Station kufuphi ne-Moti Nagar, i-Moti Nagar, iNew Delhi, iDelhi
Umgangatho ophezulu, uMgangatho we-South Wing iNBCC Indawo, iLodhi Road (kufuphi neJN Stadium) eNew Delhi 110003